Huizhou Jinhaocheng Non-kpara Fabric Co., Ltd.
Huizhou Jinhaocheng Non-kpara Fabric Co., Ltd, nke e hiwere na 2005, na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ụlọ ekpuchi ebe 15,000 square mita, bụ ọkachamara chemical eriri nonwovens mmepụta na-abara enterprise.Our ụlọ ọrụ ghọtara n'ụzọ zuru ezu akpaghị aka mmepụta, nke pụrụ iru a ngụkọta kwa afọ ike 6,000 tọn na ihe karịrị iri puku kwuru iri mmepụta edoghi na ngụkọta. Dị na Huiyang District, Huizhou City of Guangdong Province, ebe e nwere ihe abụọ elu-ọsọ crossings. Anyị ụlọ ọrụ na-arụ adaba njem ohere na na 40 nkeji na-akwọ ụgbọala si Shenzhen Yantian Port na 30 nkeji si Dongguan.
Anyị na ngwaahịa na-ekewa n'ime: agịga chịngọm ná ntutu Series, Spunlace Series, Kwes o sie (Hot ikuku site na) Serial, Hot Rolling Serial, Quilting Serial na Lamination Series.Our isi ngwaahịa bụ: multifunctional agba chere, e biri ebi na-abụghị kpara, akpakanamde ime ákwà, odida obodo engineering geotextile, kapeeti isi ákwà, electric blanket na-abụghị kpara, idebe ihe ọcha ekpochapụ, ike owu, ngwá ụlọ nchedo ute, matarasị na mpe mpe akwa, ngwá ụlọ padding na others.These na-abụghị kpara na ngwaahịa na-n'ọtụtụ ebe na abatawo dị iche iche ubi nke oge a na otu, ndị dị otú ahụ dị ka: gburugburu ebe obibi-echebe, ụgbọala, akpụkpọ ụkwụ, ngwá ụlọ, matarasị, uwe, handbags, ụmụaka, iyo, ahụ ike na-elekọta, onyinye, eletriki onunu, audio ngwá, engineering ewu na ndị ọzọ ọrụ. Akpụ e ji mara nke ngwaahịa, anyị na-ọ bụghị nanị na zutere anụ ụlọ ina kamakwa exported na Japan, Australia, Southeast Asia, Europe na n'ebe ndị ọzọ dị ka nke ọma dị ka ụtọ a elu aha si ahịa n'ụwa nile.
High ngwaahịa mma bụ ihe ndabere anyị ume. Na a Ịhazi na controllable management usoro, anyị enweta ISO9001: 2008 quality management usoro asambodo. All nke anyị na ngwaahịa ndị environmentally friendly na aka iru, ịdị ọcha na ịdị PAH, AZO, n'akụkụ benzene 16P, formaldehyde, GB / T8289, EN-71, na F-963 na British ọkọlọtọ BS5852 ire ọkụ retardant egbochi ọkụ testing ụkpụrụ. Ke adianade do, anyị na ngwaahịa na-eme ihe RoHS na OEKO-100 ụkpụrụ.
Iji nọgide na-enwe competitiveness nke na ngwaahịa, ọrụ anyị na-akwụ oké anya ka nnyocha na mmepe nke ọhụrụ ngwaahịa, akpan melite R & D ngalaba, na-onwem na elu na ngwá nakwa dị ka ekwe, ezi uche, ọkachamara, na oru pesonel. R & D ọrụ lekwasịrị anya ọhụrụ ihe na nkà na ụzụ na-emekarị na mba ahịa, dị ka kwa ahịa 'mkpa, na-emepe emepe ọhụrụ fashionable na elu-tech-abụghị kpara products.At ugbu a, anyị ụlọ ọrụ n'ozuzu R & D larịị, e synchronized na mba ahịa ina, ma nyere a ike nkwa maka ume mmepe nke anyị ụlọ ọrụ na-eduga na ngwaahịa.
Ke adianade inwe oké mkpa elu-tech anya na azụmahịa mmepe, anyị ụlọ ọrụ bụ otu n'ime ndị na-abụghị kpara ụlọ ọrụ ọsụ ụzọ nke etinyere maka a ọnụ ọgụgụ nke patented ngwaahịa na ọhụrụ ihe. Anyị ụlọ ọrụ agbaso isi na nkà ihe ọmụma nke "professionalism, iguzosi ike n'ezi na ọhụrụ" na management ebumnuche nke "eziokwu, àgwà mbụ, ndị ahịa mbụ". Anyị na-anọgide inyocha ifịk ifịk, na-n'elu, na ngalaba-ike "merie-mmeri" na-egbuke egbuke ga-eme n'ọdịnihu na ị!